Manbarroo haraa uumuu
Qaaqa Qindeessaa Maacroo banuudhaaf Meeshaalee - Maakroota - Maakroota Qindeessi - Bu`uura LibreOffice fili itti aansuudhaan sajoo Qindeessaa yookiin Mojuulii Fili Bu`uura IDE keessaa cuuqaasi.
Gabatee Manbarroo cuuqaasi.
Tarree Iddoo keessaatti manbarroo iddootti walqabsiisuu barbaadan fila. Maacroota LibreOffice fi gulaalee osoo filtan, manbarroon fayyadama LibreOffice keessatti argamuu fi galmeewwan maraaf ni jireessa. Osoo galmee filttan manbarroon galmee kanatti miilta`a akasumas iddoo sanarraa qofa jireessa.
Manbarroo Haaraa uumuuf Haaraa cuuqaasuudhan maqaa saagi.
Tarree Iddoo keessaatti manbarroo iddootti miiltessuu barbaadan fila. Maacroota LibreOffice fi gulaalee osoo filtan, manbarroon fayyadama LibreOffice keessatti argamuu fi galmeewwan maraaf ni jireessa. Osoo galmee filttan manbarroon galmee kanatti miilta`a akasumas iddoo sanarraa qofa jireessa.
Manbarroo alaantoo miiltessuuf Miiltessi cuuqaasuudhan fili.
Qaaqa Manbarroo miiltessii keessatti manbarroo miiltessaman mara fili. Qaaqan manbarroota faayilii filame keessatti qabaman maraa agarsiisa..
Manbarroo akka ilaalchaati saaguu yoo barbaadan sanduuqa akka ilaalchaati Saagi (read-only) qofa mirkaneessi. Manbarroon dubbisuu-qofa fankishinii guutuu dha garuu Bu`uura IDE fooyyessuu hin danda`u.
Sanduuqa manbarroo jiru bakka buusi mirkaneessi yoo manbarroon maqaatiin walfakaatu akka dabalamee barreefamu barbaade.
Manbarroo miiltessuuf TOLE cuuqaasi.
Tarree keessaa manbarroo haqamu fili.
Manbarroo akka jiruun haquun mojuulii jiranii fi adeemsa fi fankishinii walqixaa hunda haqa.
Manbarroo durtii "Standard" jedhamu haquun hin danda`amu.
Manbarroo akka ilaalchaatti saagame osoo haqtan manbarroo mataa isaa osoo hin taane ilaalcha qofaatu haqama.
Qindeessuu mojuulii fi qaaqalee
Mojuulii haaraa yookiin Qaaqa uumuu
Gabatee Mojuulii yokiin Qaaqa cuuqaasi.
Manbarroo iddoo mojuuliin saagamee filuudhaan Haaraa cuuqaasi.
Mojuuliif yookiin qaaqaf maqaa saaguudhaan TOLE cuuqaasi.
Maqaa Mojuulii yookiin Qaaqa jijjiiruu
Maqaan akka si`a lama jijjiiramu,cuuqaasota gidduu afuurfannoo wajjin mojuuliin cuuqaasi. Maqaa haaraa saagi.
Bu`uura IDE keessatti, maqaa mojuulii yookiin qaaqa jala gabatee argii irratti mirga cuuqaasi, Maqaa jijjiiri fila itti aansuudhaan maqaa haaraan barreessi.
Jijjiirama keessan dhugoomsuuf Saagi dhiiba.
Mojuulii yookiin Qaaqa Haquu
Mojuulii yookiin qaaqa tarree keessaa haqamu fila. Cita galfata mullisuuf yoo barbaachise, galfata lama cuqaasi.
Mojuulii akka jiruun haquun adeemsa fi fankishinii jiran hunda mojuulii keessaa haqa.
Projektii Galmee yookiin Qajoojii gidduutti qindeessuu
Mojuulii galmee, qajoojii fi fayyadama gidduu ssiiqsi yookiin galagalchu
Wanta barbadan gidduutti mojuulii yookiin qaaqa siiqsuuf yookiin galagalchuuf galmee yookiin qajoojii mara bani.
Mojuulii yookiin qaaqa gara galmee biraatti siiqsuuf, tarree keessaa wanta walqixeee cuuqaasi itti aansuun gara iddoo barbaadametti harkisi. sarari dalgee iddoo galtee wantaa ammee garsiisa garuu ni harkisa. Furtuu AjajaCtrl iddooquun garuu wantaa galagalchuuf siiqsuurrayyuu ni harkisa.
Title is: Qindeessuu Manbarroo fi Mojuulii